musha / Kicheni Faucets / Pot Yekuzadza Faucets / WOWOW Pot Yekuzadza Faucet Pamusoro Pechitofu MuBrashi Nickel
WOWOW Pot Filler Faucet Pamusoro peStove MuBramm Nickel
Rated 5.00 Kunze kwe5 yakavakirwa 25 kasitoma ratings
(25 kasitoma wongororo)
Iko nyore yekuchenesa kugona kwemidziyo yayo kunoita kuti pot filler kicheni tumpu yakakodzera kushandiswa kwehutsanana.
Yakagadzirwa nesimbi isina simbi, poto filler kicheni faucet inonyanya kurwisa ngura.
Iyo mbiri-yakabatanidzwa poto filler inoshongedzwa zvakanaka, uye zvichidaro, hazvisi nyore kupaza kana kunze kwechimiro.
Chigadzirwa icho chiri nyore kushandisa pasina kuedza kukuru kubata.
2311100 mirairo yekuisa
Wedzera classic kubata kukicheni yako neiyi yakanaka inodzoreredzwa Wall-Mount Pot Filler 2311100 iyo inosanganisira yakasarudzika yakasarudzika silhouette.
Yakakodzera mukicheni yakakura yekumusoro ino pombi yekushambadza pane yako yekubheka kuti uzadze mapoto ako pasina kubheka kutakurira kunze kwekupinza mune stovetop.
Hardware Zvimiro: Yakafukidzwa pasi peSiginecha Hardware's mashoma hupenyu hwevimbiso.
Kakavharwa kaviri kunoita kuti mutengi adzivise mvura pane mamwe madziro kana chipanji, saka kudzora rwizi rwemvura muchikamu chekushandisa.
Faucet muviri wakaunganidzwa wendarira unonyanyisa kurwisa ngura uye sarudzo yakasarudzika yekuramba kupisa kwakanyanya.
Kamwe kaburi kumadziro-kwakagadzikwa setup Matanho maviri ekudhirowa majoini anotendera iyo pombi yekuzadza kuti ipukute painenge isiri kushandiswa.
Magadzirirwo: Kureba: 9-1 / 2 ″ (pasi kumusoro kumusoro chaiko kwepombi).
Kureba kweSpout: 2-3 / 4 ″ (pakati pegumi remadziro kuburitsa).
Yekukurumidza kuyerera: 1.8 magironi-paminiti Faucet.
SKU: 2311100 Categories: Kicheni Faucets, Pot Yekuzadza Faucets Tags: Bronze Nickel, Pot Yekuzadza, Wall Walled
Pot Yekuzadza Faucet Kupeta Kaviri Bata Brashi Nickel
Ndakaona vamwe kunze uko kune imwe mari yakawanda. Uyu waive mutengo wakakura, ndakauisa zvinehunyanzvi asi puramba akabvuma kuti waive mutengo wakanyanya uye mhando yakanaka.
Takatenga izvi zvebhavhu, sezvo tanga tine mapaipi akapatsanuka anouya kuburikidza nemadziro pachinzvimbo cheyakajairika nzvimbo yekusanganisa.
Zvese zvakagadzirwa zvakanaka. Inoshanda zvinoshamisa. Kuremera kuvaka. Yakasimba uye yakanaka dhizaini. Ngaagare nekusingaperi!
Kutaridzika kwakachena uye iyo mbiri vharuvhu system inoita zvakanaka kudzivirira kudonha mushure mekuvharwa. Dambudziko rekuzadza hari iri nderekuti maoko haana kuenzana kumatanda saka zvinoita sekunge ari kutsvedza zvishoma. ZVIMWE ZVAKAITIKA: Kambani yakaona ongororo yangu ndokusvikira ruoko ikati ndagamuchira chigadzirwa chakaremara ndokunditumira imwe nyowani pasina mibvunzo yakabvunzwa. Ivo vaive vechokwadi, iyo nyowani inoratidzika kunge yakanaka. Kubata kukuru kwevatengi
Zvinotyisa handikwanise kutaura zvakakwana nezve iyi pombi yekuzadza. Wese munhu anoshanyira imba yangu anoifarira. Kuteedzera kwevatengi kwaive kwakanaka ini handina kukwanisa kukumbira irinani rebasa reps.
Ida dhizaini. Anonzwa akasimba. Ini ndanga ndichienda kunotenga imwe kubva kuDelta kumba Depot seizvi asi inodhura ingangoita mazana mana emadhora, saka ndakafunga pane iyi mushure mekuverenga wongororo. Ndiri kufara kuti ndawana, asi ndichazotumira mifananidzo mushure meWOWOW yaiswa. Kutaridzika kwazvino kwazvo uye kuda kuti zvinonzwa sei.
Kunyatsogutsikana nehari ino yekuzadza. Pombi yangu akaiisa uye inoshanda nemazvo. Ini ndinoda iyo inotaridzika uye mutengo wacho waive nemusoro chaizvo. Iye mutengesi anga achigara zvakanyanya uye achipindura kumibvunzo yangu maererano nechigadzirwa.
Ini ndinoda iyi yekuzadza hari. Handina kumbobvira ndafungidzira kuti zvingava nyore sei kuva nazvo. Mvura inoyerera mushe uye haimbofa yakatsemuka. Ini zvakare ndine hari yangu yekofi padivi pechitofu changu uye ruoko rwunosvika zvakakwana pakuzadza dura.
Ini ndaifanirwa kutenga gomba resaha pakaunda kangu uye ndoita zvimwe pasi pechinjanareswa kuti ndiipinze. Pane imwe chete mune kwayo ikozvino yakakwana! Iwo akabata haana kuisirwa intuitive. Mumwe anofanirwa kufunga nezve iyo on / off nzvimbo dzemaviri anobata kuti zviitwe chaipo zvese zviri zviviri uye kure. Zvimwe kunze kweizvozvo runako rwemari.
Iyi yekuzadza hari yakanga isingadhure, uye inotaridzika kunge yakanaka uye inoshanda kwazvo. Iko matte nhema kupedzisa. Inotambanudza nzira yese kune yekumberi kupisa. Inofamba nyore uye yaive nyore kuisa. Iine rwizi rwakanaka rwekuyerera kwemvura.
Mutengo mukuru, unoshanda sekutarisirwa. Pedzisa anotaridzika akanaka, akanaka hunhu. Zvichida tungamira mahara. Ndinoshuva kuti yakauya nemabatiro maviri sezvinoita vazhinji asi zvese mune zvese zvandinokurudzira.
Iko kuwedzera kukuru kukicheni yedu. Muvaki anoita basa akaifarira zvakanyanya iye achazoisa imwe iye. Zvese zvakanaka! Wese munhu akafunga kuti kwaive kwakanaka chose.
Akafadzwa kwazvo nehunhu uye nyore kuiswa. Yakakura yekicheni yangu yekutengesa. Inogona kushandiswa chero kupi. Chaizvoizvo kurudzira.
Isu takangogadziridza kicheni yedu ndokuwedzera iyi yakanaka yekuzadza hari. Yakanaka kuvakwa uye kukwira kumusoro nyore!
Ida pombi iyi. Inoshanda zvikuru! Iyo mbiri pa / yekuvhara mubato inoshanda kwazvo kuti usasvike pamusoro pechitofu chinopisa kubatidza.
Takashandisa pombi iyi mubathroom medu. Kuisirwa kwaive nyore uye kunoratidzika kunge kwakanaka!
Bhegi iri rakanakisa uye haugone kurova mutengo! Ini ndanga ndichinetseka kuti zvingave zvisina mwero asi zvakagadzirwa zvakanaka.
Zuva rakatevera rekugashira chigadzirwa, ndakatanga kumisikidza pombi yangu yekuzadza pombi. Huwandu hwe PTFE tambo tepi hwakakwana. Mushure mekutanga nguva ini yandatadza kuisa nekuda kwetepi yakawandisa, iyo yasara PTFE tambo tepi yanga ichakakwanira kuiswa kwangu kwechipiri. Mushure mekumisikidzwa kwekumisikidza, ndakaitisa bvunzo dzakawanda, uye hakuna kubuda kwemvura kwakaitika!
Iko kutakura kwaikurumidza, uye ini ndakagamuchira chigadzirwa pazuva rechitatu mushure mekutenga. Kicheni yangu ichangobva kugadziridzwa inoda kuisa pombi. Kicheni isina pombi haikwanise kushanda nemazvo. Ndiri kuda kuisa pombi yekuzadza pombi pamadziro. Yakakwira-yepamusoro PTFE tambo chisimbiso tepi yakakosha kwazvo kune iro basa rekuisa. Kutenda kune yepamusoro PTFE tambo chisimbiso tepi yakapihwa nemutengesi. Mari yacho yakakura kwazvo uye yakwana kuti ndiishandise ka2-3.
Iyi pombi yekuzadza pombi inoita kuti kicheni yangu ishande zvakanyanya. Munguva yakapfuura, ini nguva dzose ndaida kutakura hari inorema kuti ndiwane mvura pasi pepombi kana kudira mvura muhari nemamwe makontena. Ichi chinhu chinonetsa uye chinofinha. Pakugadziridza kicheni yedu nyowani, ndakabudirira kunyengetedza murume wangu kuti aise pombi yekuzadza pombi. Piper poto yekuzadza pombi yaive imwe yekuyedza kwedu uye takagutsikana zvikuru neiri tepu. Inonyanya kugadzirwa nendarira, uye pamusoro pacho matte nhema yakasarudzika, inotaridzika chaizvo uye inoyevedza. Mushure mekunge yaiswa mukicheni, inova nyeredzi yekicheni yedu. Kubva zvatakapa nyanzvi dzemapombi ekuisa, zvese zvakafamba mushe, uye wowow poto yekuzadza pombi yanga ichishanda zvine hunyanzvi kusvika parizvino, ndinoida!
Bhokisi iro chigadzirwa chakauya mukati chaitendera kuti riendeswe pasina chero mamaki esimbi yekukweshera pasimbi. Chikamu icho chakaiswa mumadziro chaive nyore zvakakwana kuti chimuke sezvo isu taive takatarisa kubva kune nyowani yekuvaka. Handitauri kutaura kuisa mumadziro aripo. Chigadzirwa chakauya ne allen wrench yekuisa coupler. Iyo woudl yanga isinganzwisisike kana ivo woudl vaisanganisirawo teflon tepi asi chero chishandiso bhokisi rinoshanda nemapombi ratova naro. Iri bhuku riri nyore zvakakwana kutevera. Tarisa internet kuti uone kure kusvika pamadziro iwe unofanirwa kuisa pombi sezvaunoda kuti ikwanise kuzadza hari asi panguva imwechete usarova microwave yako pamusoro pezera rako.
Isu tichangobva kuisa iyo yekuzadza poto, munhu wese aifungira uye kufungidzira kuti handizoishandisa zvachose. Vari kukanganisa! Sezvo iwe uchikura iyi poto yekuzadza inobatsira iwe kuti usatakure hari inorema nemvura kuchitofu. Vazhinji shefu kana chero munhu anobika zuva nezuva anozoda izvi uye anozozviona zvichibatsira. Ini ndinoda dhizaini uye kubata. Chandinongonetsekana nacho ndechekuti kana chitofu chiripo uye iyo yekuzadza hari iri pamusoro pekupisa, ingazokanganisa chero chii? Parizvino sezvo ini ndine zvitanhatu zvinopisa ndinoedza kusashandisa chinopisa chiri pamusoro pemba yekuzadza. Yakurudzirwa.
Yakanaka, yakanyatsogadzirwa poto yekuzadza. Hauna kuona mhando yepamusoro pamutengo. Kuisirwa kwakananga chaizvo. Hazvingaite pasina imwe zvakare. Chinhu chacho chaive chakaputirwa zvakanyanya, uye hapana hunyope mukati meiyo unit. Yakasimba uye yakatsetseka. Kupedzisa kwakwana.
Iyi yekuzadza hari yakagadzirwa zvakanaka uye inoita kuwedzera kunoshamisa kukicheni yangu nyowani. Pombi yangu yakaisa nyore nyore iyo yekuzadza poto. Inotaridza kugadzikana uye iko nyore kushandisa kunopa makore emufaro kumhuri yangu.
Kuisa kuri nyore, kunotaridzika zvakanaka. Inonzwa yakasimba uye kutonga kuri nyore. Yakanga iine iyo kwevhiki chete. Kufarira izvozvi.
Ingoisa iyo., Inotaridzika zvakanaka
WOWOW maviri Handle Yepfekeni yekicheni Faucet Iine Side Spray ...
WOWOW Brushed Simbi Kicheni chisanganiso Tap - P ...